Location: musha » Kutumira » Airlines » Thai Airlines Dambudziko Parizvino Inowana US$187 Mamiriyoni Emari Injection
Thai Airlines Dambudziko Parizvino Inowana US$187 Mamiriyoni Emari Injection
Mufananidzo nerubatsiro rweThai Airways
Bhangi reExport-Import reThailand (EXIM Thailand) rakapa 6.2 bhiriyoni THB baht (inenge US$187 miriyoni) kutsigira ndege shanu dzeThai (Thai Airways International, Thai Smile, Thai AirAsia, Thai VietJet Air, uye Bangkok Airways) kuvabatsira. kupukunyuka dambudziko rakakonzerwa neCOVID-5 denda.
Mari dzakagamuchirwa nendege imwe neimwe yevanobatsirwa hazvizivikanwe parizvino, asi mutungamiri webhangi, Rak Vorrakitpokatorn, akati rutsigiro runosanganisira 3.5 bhiriyoni (US $ 105.5 miriyoni) mukubvisa chikwereti uye imwe 2.7 bhiriyoni THB (inenge US $ 81.5 miriyoni). mune mamwe mitsara yechikwereti kuchengetedza liquidity uye vashandi.
Mushure mekuvhunduka kwegore rekutanga redenda, indasitiri yendege yeThai zvishoma nezvishoma yakatanga kupora muchikamu chechina cha2021.
Izvi zvaive zvekutenda kudzoreredzwa kwezvirambidzo zvekupinda munyika uye kusvika kwevashanyi vekutanga. Nekudaro, kudzoserwa kwemitemo yakasimba pakati paDecember mukupindura kune Omicron musiyano yakonzerazve kusava nechokwadi pamusoro pekupora kwagara kuri kuita kwendege zhinji.
Kufanana neiyo yeThai Airways, semuenzaniso, mutakuri wemureza weThai akamhan'ara kuchengetedzwa kwekubhuroka muna Chivabvu 2020, nekuda kwechikwereti chinodarika mabhiriyoni matatu emadhora. MunaGunyana 3, dare repakati rekubhuroka reBangkok rakaraira ndege iyi kuti iite chirongwa chekugadzirisa makambani, icho chakaenderera mberi muna 2020.
Muna Gumiguru 2021, matrustees akapa rondedzero yekufambiswa kwekugadzirisa hurongwa hwayo, zvichiratidza kuti US$39.09 miriyoni yechikwereti yakanga yatobhadharwa kune vane zvikwereti uye zvikwereti zvicharamba zvichibhadharwa maererano nehurongwa hwakabvumidzwa muna Chikumi nekubhuroka. dare.
Kunyange muItaly, zvisinei, kambani yakave nematambudziko, yakavhura nzira yekudzinga pamwe chete iyo inosanganisira vashandi 21 kubva muhuwandu hwe31 munhandare dzendege mbiri dzeItaly dzeRome neMilan.
Dzimwe nhau nezve Thai Airways
Dubai Tourism Zvino Inoisa Zvitarisiko zvayo paGeneration Z
EU inovhara kupinda munyika yose pasina visa